ISICELO - Beihua Polymer eziNcedisayo Co., Ltd.
Amavili kufuneka akwazi ukuyilawula imoto nangaliphi lobushushu kunye uzinzo phezulu, ihlala phezulu kunye nesikhundla elungileyo umthwalo. Le dispersibility wolongezelelo ngalinye ivili limisela ukuba umgangatho wamavili efanayo. masterbatch Jiaxing Beihua pre-saa kuqinisekisa umsebenzi amacandelo ezifana arhente vulcanizing namafutha kwaye kunciphisa umyinge isiphene imveliso. Singasebenza kwiindawo ezahlukahlukeneyo ivili kunye tube ngaphakathi. Ifanele ukuba iqondo lobushushu ukuxuba eliphantsi.
| kohambo |
Undoqo kubomi wenkonzo izihlangu kuxhomekeke kule kuphela. Le kuphela olungileyo kukukhanya, ukunxiba-ukumelana kwaye akukho ivumba. Ezintendeni abahluphekayo badla ngokuba neengxaki ezifana amaqamza, ukuzaliswa asanelanga, nasezantsi eyaphukileyo. Kukho iingxaki imbonakalo ezifana njengemvula komhlaba kunye nombala. iimveliso Jiaxing Beihua Ngaba linokusetyenziswa namalungu yerabha ezifana amathe kunye midsole kunye namalungu EVA ugwebu, kangangokuba uxhathiso banxibe onyawo uyaphuculwa, lo midsole ngokulinganayo foamed, kwaye izinto yerabha kungancitshiswa phakathi kwenqubo ukuqinisekisa imveliso olufanayo mfanelo.
| iimveliso batik |
malungu Imbonakalo ezifana iimveliso irabha, ingakumbi uphawu iziqwengana imoto, zineemfuno phezulu phezu kwamanzi, kunye nezongezelelo eqhelekileyo kunokubangela iingxaki imbonakalo ezifana inaba. Jiaxing Beihua Masterbatch usebenzisa iteknoloji eyodwa ukuqinisekisa fineness lwemveliso ze okunokukunceda ukuzisombulula le ngxaki. amatywina Automotive oyile, zokutyubhisha, njl zineemfuno ezikumgangatho ophezulu. Kuyimfuneko ukuqinisekisa ukuba izinto ezisebenza phantsi lobushushu eliphezulu okanye ezinganyibiliki kakhulu kwaye ihamba. kwiintsali ezimagqagala kuya kunciphisa kakhulu ubomi inkonzo iimveliso. Emva koko masterbatch Jiaxing Beihua kaThixo uyazikhethela.
Ezinye Amasuntswana masterbatch pre-saa kwakhona zingasetyenziswa amabhanti okuhambisa, izileyi irabha, ucingo intambo, iiplagi zamayeza, njengezingxobo vulcanized kunye namanye amashishini.